तपाईलाई थाहा छ ? महिलाको गोप्य यौ’न व्यवहार यसरी पत्ता लाग्छ ! पुरा हेर्नुहोस्... -
भर्खरै रुकुम काण्डमा १८ जना प’क्राउ,२ फरार,वडा अदक्ष्यले नै प्रमाण नष्ट गरेपछि Ang Kaji को आक्रमण ! पुरा हेर्नुहोस् भिडियो सहित…
तपाईलाई थाहा छ ? महिलाको गोप्य यौ’न व्यवहार यसरी पत्ता लाग्छ ! पुरा हेर्नुहोस्…
सौन्दर्यको प्रतिकका रुपमा महिलाको ओठलाई लिने गरिन्छ । त्यसमाथि गुलाबी ओठ त महिलाहरुका लागि झनै आकर्षक मानिन्छ । जस कारण पनि अधिकांश महिलाहरु आफ्नो ओठ प्रति निकै सजक र सतर्क रहँदै आएका पाइन्छन् । तर ओठ खाली सौन्दर्यको खास पहिचान मात्र रहेन ।
ओठले महिलाको सौन्दर्यसँगै उनीहरुको यौ’न व्यवहार वा चालचलनका विषयमा समेत बुझाउँछ । शरीरका हरेक अंगहरु हाम्रा अन्य अंगहरु कुनै न कुैन हिसाबले अन्र्तसम्बन्धित नै रहेका हुन्छन् । जस्तो की नाभी (नाइटो) र मानव स्वास्थ्यका बीचमा गहिरो सम्बन्ध रहेजस्तै महिलाको ओठले उनीहरुको यौ’न व्यहारसँग सम्बन्ध राख्दछ ।
स्टकल्याण्डमा गरिएको अध्ययन अनुसार थेप्चो ओठ हुनेभन्दा माथिल्लो ओठ बिचमा केही अग्लो र थोरै चुच्चो भएका महिला यौ’न सम्प’र्कका बेला छिटो चरमोत्कर्षमा पुग्ने तथ्य पत्ता लागेको छ । महिलाको ओठको प्रकार यो’नी, पाठेघर तथा अरु यौ’नां गको सं’वेदनशीलतासँग सम्बन्धित हुने अनुसन्धानकर्ताहरु बताउँछन् । त्यसैले अग्लो र पुष्ट ओठ हुने महिलामा चर’मोत्कर्षमा पुग्ने गति थेप्चो आकारका ओठ हुनेमा भन्दा १२ गुणा बढि हुने ठहर उनीहरुले गरेका छन् । एजेन्सी
रमाइलो को लागि मात्र भिडियो…
← यी सुन्दरी युवतीले कुकुरसँग नि*यमित यस्तो गर्न थालेपछि… (हेर्नुहोस् भिडियो)
बालिकाको पेट बढ्दै गएपछि खुल्यो यस्तो र,हस्य ! →